HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bichlamar Catalan Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galicienne Galoà Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kabyle Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Luo Malagasy Malayalam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Norvezianina Oromo Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Pendjabi Persianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Vezo Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Éwé
Misy mpandika teny 290 eo ho eo any amin’ny firenena enina any Meksika sy Amerika Afovoany. Mandika boky ara-baiboly ho amin’ny fiteny 60 mahery izy ireo. Nahoana izy ireo no miezaka manao an’izany? Satria azo antoka hoe hanohina ny fon’ny olona ny boky ara-baiboly rehefa amin’ny fiteny mora azony.—1 Korintianina 14:9.
Nafindra tany amin’ny toerana mampiasa an’ilay fiteny ny mpandika teny sasany tao amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Mexico, renivohitr’i Meksika. Nahoana? Manatsara ny asa fandikan-teny izany, satria afaka mifanerasera bebe kokoa amin’ny olona mampiasa an’ilay fiteny ireo mpandika teny. Tsy sarotra amin’izy ireo amin’izay ny mandika boky sy gazety mora azon’ny olona.
Inona no tsapan’ireo mpandika teny rehefa nafindra izy ireo? Hoy i Federico, mpandika teny amin’ny fiteny guerrero nahuatl: ‘Efa folo taona aho izay no tany Mexico, fa fianakaviana iray ihany no mba hitako hoe nampiasa an’ilay fiteniko. Amin’izao izahay nifindra izao anefa, dia saika ny olona rehetra ao amin’ireo tanàna eny akaikinay no mampiasa an’ilay fiteny.’
Mpandika teny amin’ny tenim-paritra alemà i Karin ary any Chihuahua, any Meksika, izy no mandika teny. Hoy izy: “Lasa maharaka ny fiteny ampiasain’ny Menonita aho satria etỳ akaikin-dry zareo no mipetraka. Kely ilay tanàna misy anay, ka rehefa mitazana eo am-baravarankely aho, dia afaka mahita an’ireo olona handray soa amin’ny asa fandikan-teny ataonay.”
Hoy i Neyfi, miasa ao amin’ny biraon’ny fandikan-teny any Mérida, any Meksika: “Rehefa mampianatra Baiboly amin’ny fiteny maya izahay, dia lasa fantatray ireo teny tsy azon’ny Maya. Mitady fomba tsotra handikana an’ireny teny sarotra ireny àry izahay.”
Inona kosa ny soa raisin’ireo olona mahazo boky na gazety amin’ny fiteniny? Ity misy ohatra. Tlapanec no fitenin’i Elena. Efa 40 taona teo ho eo izy no nivory tsy tapaka niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tamin’ny teny espaniola anefa ny fivoriana rehetra ka tsy nisy azony. Hoy izy: “Te hivory foana fotsiny aho.” Nianatra Baiboly tamin’ny bokikely amin’ny teny tlapanec anefa izy, tatỳ aoriana. Vao mainka izy lasa tia an’i Jehovah, ka nanokan-tena ho azy ary natao batisa tamin’ny 2013. Hoy i Elena: “Misaotra an’i Jehovah aho fa navelany hahazo ny hevitry ny Baiboly.”